कति दिन पो बित्छ र यस मान्छेसँग ? | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 06/22/2008 - 22:40
मनमा कुनै त्यस्तो युवकको स्पष्ट छाया पनि आइसकेको थिएन। कसैले प्रत्यक्ष रूपमा प्रेमप्रस्ताव राखेको थिएन। आफ्नो प्रेमी वा पति यस्तैयस्तै होस् भन्ने जस्तो अवधारणा पनि बनिहालेको थिएन। तर त्यसैत्यसै शरीर र मन भने चञ्चल र कस्तो-कस्तो हुन थालेको थियो। छिट्टै रिस उठ्ने वा झ्वाट्टै खुसी हुने जस्तो मनस्थिति बन्न थालेको थियो। फूलहरू मन पर्न थालेको थियो, कहाँकहाँदेखि खोजेर ल्याएर फूल रोप्‍न थालेकी थिएँ। आमासँग गनगन गर्दै लुगाहरू थप्‍न थालेकी थिएँ। साथीहरूलाई कर गरेर एक दिन मैले पनि ''ब्युटी पार्लर'' पुर्‍याइमागेँ र अनुहार, कपाल, रौँहरू मिलाइमागेँ। हेर्दाहेर्दै ऐनामा म त अर्कैजस्ती देखिन थालेँ।
म धेरै राम्री थिइनँ तर नराम्री पनि थिइनँ। साथीहरूका समूहमा म अलग्गै केही कुराले आकर्षक नै थिएँ झैँ लाग्छ। मनमा एक किसिमको अहम् जस्तो पनि थियो। आकृति स्पष्ट नभएको, नदेखेको, नचिनेको तर कुनै युवकको इच्छा भने हुन थालेको थियो। देखेका मध्ये, जुनै पनि कुनै न कुनै रूपले राम्रा लाग्थे तर ती किन राम्रा, केले राम्रा थिए - बुझ्दिनथेँ। तथापि तीमध्ये कुनैलाई पनि नायकका रूपमा सोच्न थालेकी भने थिइनँ।
धेरै-धेरै पढ्ने, के-के हुने, ठूलो मान्छे हुने आदि सपनाहरू थिए। यस संसारमा धेरै विकृति र कुचालहरू थिए र तिनलाई नाश गर्नुपर्ने थियो।समाजमा चलेका सैयौँ नराम्रा कुराहरूको भण्डाफोर पनि गर्नुपर्ने थियो। पढ्नमा निकै जाँगर चल्थ्यो। जान्ने भएर अरूलाई जित्‍न तथा कसैलाई देखाउन मन पनि थियो। तर त्यो 'कसै'को टुङ्गो लागिसकेको थिएन। स्कुल जाँदा र फर्किँदा बाटामा केटाहरू पनि सँगै हुन्थे। एउटै गाउँटोलका साथीहरू सानैदेखिका सँगी पनि थिए। हाँसखेल, रमाइलो र झगडा पनि भइरहने। एकअर्कामा मर्यादा पनि नराखी ''तँ-तँ'' चल्ने केटाहरू तर हाम्रा संरक्षकजस्ता पनि थिए। उनीहरू हाम्रा रक्षकजस्ता भइरहन्थे प्रायः। हामीले हेपे पनि, जे भने पनि तर अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने तिनीहरू नै हुन्थे।
''नानी ! बाहिर आएका मान्छे चिन्नुभयो ?"
"देखेको भए पो चिन्नु ? को नि भाउजू तिनीहरू ?"
भाउजूले नराम्रो रिसाएझैँ झर्केको अनुहार पारेर भन्नुभयो - ''खै ? केही बुझ्दिनँ म यस घरको चाला। हामी आइमाईले बोल्नै नहुने। तपाईँको दादा पनि उस्तै बाबा पनि उस्तै। यति चाँडै तपाईँको बिहे गर्न के बितेको छ र ? तपाईँलाई हेर्न आएको रे।"
''कति पढ्ने मन थियो आफूलाई, पढ्न दिएनन्। तपाईँलाई पनि त्यस्तै हुने भो अब। राम्ररी हेर्नू आफ्नो बेहुलो।''
रिसाएरै बोलेर निस्कनुभयो उहाँ कोठाबाट। भाउजू निस्कनेबित्तिकै आमा पस्‍नुभयो। बडा दयनीय र जिज्ञासु भएर आमाको अनुहारतिर हेरेँ तर त्यहाँ भाउजूको अनुहारजस्तो भाव थिएन, बरू कुनै ठूलै उपलब्धि हात पर्न लागेको जस्तो गर्व थियो। भन्नुभयो - ''के भन्दै गई तेरी भाउजू ? ठूला मान्छेले गर्न लागेको काममा किन भाँजो हाल्न खोज्छे यो घरकी बुहारी भएर ? त्यसको कुरा नसुन् है जमुने।'' निस्कि पनि हाल्नुभयो। मैले केही बोल्नै परेन।
राति धेरैबेरसम्म तिनीहरूले आमाबुबा, दाजुहरूसँग बात मारे। मैले अर्को कोठामा भित्तामा कान लगाएर सुनिरहेँ कुराहरू। कति बुझेँ, कति बुझिनँ। बुझे-नबुझेकालाई जोडजाड गर्दा निचोड थियो - '' केटाका बाबु छैनन्, ऊ बर्सीको हुँदै मरेका। विधवा छोरी र नातिलाई माइतीले आफैँसँग लगी केही वर्षपछि छोरीलाई अर्को बिहे गरिदिएका र नातिलाई मावलीले नै पालेका, हुर्काएका। धनी मावली भएकाले केटाको पैतृक सम्पत्तितिर कुनै चासो नलिएको, उनीहरूले नै एक अंश दिएको। मावलका हजुरबा, हजुरआमा दुवै बितिसकेका, सबै मामाहरूको आ-आफ्नै घर-व्यवहार सुरु भएकाले भान्जालाई पनि बिहे गरी अलग्गै व्यवहार गर्न छुट्याइदिने सोच भएको। राम्रो शीलस्वभाव भएकी घरानियाँ र व्यवहार थाम्‍ने केटीको खाँचो परेको। केटो सोझो, भलाद्मी, त्यस्तो उस्तो छट्याइँ-फट्याइँ नजान्ने, धेरै नपढेको भए पनि इमान्दार र गरिखाने प्रकारको रहेछ।''
''राम्रै भयो, चाँडै आइस्। अब भोलिदेखि स्कुल जानुपर्दैन। लुगाफाटा किन्ने, गहना बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। भन्नुमात्र बिहे, सजिलो त कहाँ हुन्छ र ? पात चाहियो, दुनाटपरा गाँस्‍नुपर्‍यो। कति काम छ कति। बिहे गर्ने भएपछि यति हतार नगरेकै भए पनि हुने नि। लोग्नेमान्छेलाई के छ र ? हाँकिदियो बस। गर्नुपर्ने त सप्पै आइमाईले।..........।''
खाना खाने बेलामा आमाले आएर धेरैबेर ढोका ढकढक्याउनुभयो, मैले ढोका खोलिनँ। त्यत्तिकै फत्फताउँदै जानुभयो। एकक्षणपछि भाउजू आउनुभयो। मैले बिस्तारै ढोका खोलेँ। कोठामा पसेकी भाउजू मभन्दा धेरै दुःखी देखेँ। साह्रै माया लाग्यो उहाँको। भन्नुभयो - '' नानी ! एक वर्षअघि यस्तै भएकी थिएँ म पनि। के गर्नु ? जतिसुकै ठूल्ठूला कुरा र भाषण गरे पनि हामी नारीलाई उस्तै हो। .........। हिँड्नुहोस् खाना खान।''
''हैन यो त भागमात्र बसी त, के भएको छ तँलाई ?" आमाको प्रश्न थियो।
''त्यसलाई लोग्ने मान्नुपर्ने, त्यसकी स्वास्‍नी हुनुपर्ने, त्यससँग एउटै कोठामा, एउटै ओछ्यानमा सुत्‍नुपर्ने, त्यसलाई जे भने पनि गर्न जीउ छाडिदिनुपर्ने, त्यसो कुरो काट्न नहुने, त्यसलाई हजुर भन्नुपर्ने...।.........।'' सोच्तै जीउ सिरिङ्ग भएर आयो। आधा रातमै उठेर चिच्याऊँ जस्तो लाग्यो।
आजभोलि गर्दै दिन बित्तै गए, बिहेको तयारीका लागि धमाधम थियो। मलाई भने खासै जाँगर थिएन। साथीहरू भेट्न आए, रोए, गए। कसैले जिस्क्याए, गए। केटाहरू आए-भेटे, टुलुटुलु हेरेर गए। दिनदिनै मन गल्दै गयो, विद्रोह शान्त हुँदै गयो। बिहे नगरी नहुने भएपछि एक्लै छटपटाउनुको कुनै अर्थ थिएन। भाउजू पनि सम्झाउनुहुन्थ्यो- ''मान्छे राम्रै छ भन्छन्, आ-आफ्नो भाग्यको फल हो। धनसम्पत्ति प्रशस्तै छ रे। मावलीले पनि दिएको, बाबुपट्टिको पनि। अब धेर पीर नलिनू नानी। नराम्रो मान्छे पनि दिनदिनै अलिअलि, अलिअलि गर्दै राम्रो-राम्रैजस्तै हुँदै आउँछ।''
जति नै भए पनि त्यसप्रति मन फर्किन सकेन। राम्ररी नहेरेको मान्छे, त्यसै-त्यसै मन नपरेको। स्कुलबाट आउँदा झ्वाट्ट देखिएका तीनजनामध्येको एउटा केटो ठूलाठूला आँखा भएको मात्र याद छ। बिस्तारै आत्मसमर्पणजस्तो हुँदै गयो। मनमा आउन थाल्यो- ''ठीकै छ, गरिदिन्छु बिहे। आखिरी त्यससँग कति दिन पो बित्छ र ?"
यस्तो सोच्ता मन अलमल्ल पर्थ्यो। त्यससँग नबिते, कससँग बित्छ त जीवन ? तर त्यसको कुनै उत्तर थिएन तथापि मनमा बारम्बार दह्रो गरी एउटै कुरो दोहोरिरहन्थ्यो - ''त्यससँग मेरो कति दिन पो बित्छ र ?"
भनेकै समयमा बिहे भयो र धुमधामले भयो। लुगाफाटा, गरगहना माइतीपट्टिबाट पनि प्रशस्तै थियो, बेहुलापट्टिबाट पनि। साथीहरूले ''ब्युटी पार्लर'' मा लगी राम्री पार्ने भएभरको प्रयत्‍न गरेका थिए तर मनमा भने कुनै प्रसन्नता थिएन। जिस्क्याउँथे- त्यसले मलाई कुनै लाजजस्तो पनि लाग्दैनथ्यो। बरु हेर न, म तिमीहरू सबैलाई के गरेर देखाइदिँदी रहिछु भन्ने लाग्थ्यो मनमा तर त्यो के गर्ने भन्ने चाहिँ टुङ्गो थिएन। यो निश्चित गरेकी थिएँ कि ऊसँग मेरो धेरै दिन बित्‍नेवाला चाहिँ थिएन।
एउटा अलग्गै राम्रै घर बनाइदिएको रहेछ नयाँ। त्यसैमा लगेर भित्र्याए। नयाँ घरमा सबैथोक नयाँ थियो। कताकता मनमा खुसीजस्तो पो भयो। मानिसहरू छाँटिँदै गएपछि मेरो कोठामा एकजना महिला पसिन्। झन्डै चार दशक उमेर खाएकी तिनले भित्रबाट ढोका बन्द गरिन्। मेरो छेउमा आएर बसिन् र बेहुलीको घुम्टो उठाएर अनुहारतिर हेरिन्। तिनका आँखा आँसुले भरिएका थिए तर अनुहार खुसीले भरिएको जस्तो थियो। भनिन्- ''नानी ! म तिम्री सासू हुँ नाताले, तर सामाजिक हक मलाई छैन। तिम्रो पतिकी आमा भएर पनि म तिम्रो ससुराकी विधवा भएर बस्‍न सकिनँ। कलिलैमा पति गुमाएकी अभागी नारी थिएँ। घरकाले साह्रै हेला गरेपछि माइतीको शरण परेकी मैले अर्को बिहे गर्नुपर्ने बाध्यता सहेँ। तर मैले आफ्नो छोराप्रतिको आमाको कर्तव्य कहिल्यै बिर्सेकी छैनँ। आज म मेरो अनाथ छोरो तिम्रो पोल्टामा हाल्न आएकी छु। तिमीले त्यसको ख्याल गर्नू आमा भएर। यसले बाबुको त अनुहारै देखेन, आमाको माया पनि पाउन सकेन। मावलमा हजुरआमा र माइजूहरूको औपचारिक मायाले हुर्किएको यो साह्रै दयनीयजस्तो देखिन्छ। थोरै बोल्ने, काम गरिरहने, हाँस्‍नै बिर्सिएजस्तो यसलाई जीवन सिकाऊ नानू ! धनको त कुनै अभाव छैन तिमीहरूलाई, तिमीले यस केटाको जीवनमा खुसी भर। सुखपूर्ण बितोस् तिमीहरूको जीवन।''
पालैपालो मन नगर्दानगर्दै तीनओटा सन्तान जन्मिए। पछिल्लोपल्ट जन्मेकी थिई छोरी। त्यसलाई देखेपछि भने मनमा बेग्लै खालको मायाजस्तो पलाएको थियो। नत्रभने अघिल्ला दुवै छोराहरू मलाई प्लास्टिकका खेलौनाजस्ता लाग्थे। नियमानुसार दूध चुसाउँथेँ, सफासुग्घर गर्थेँ, काखमा लिन्थेँ तर तिनीहरूप्रति कहिल्यै उस्तो माया जागेन। तिनलाई काखमा लिइरहँदा तिनका बाबुका अनुहारमा आँखा नाच्थ्यो र भुईँमा राखिदिन्थेँ रुवाउँदै। मनमा लागिरहन्थ्यो - ''कति दिन पो बित्छ र त्यससँग मेरो।'' रोइरहेका छोराहरू बोकेर फुल्याउँदै हिँड्थ्यो ऊ।
'तैँले यसरी किन माया मारेकी हामीलाई ? किन रुवाएकी मलाई। तीजमा बोलाउँदा पनि आउँदिनस्, चाडवाडमा पनि आउँदिनस्।'' मैले आमालाई कुनै जबाफ दिइनँ।
''आमाको मन तेरो पनि छ, पछि थाहा होला सन्तान हुर्किएपछि।'' आमाले यसो पनि भन्नुभयो।
बाहिरबाट देख्दा कहिल्यै पनि हाम्रो घरभित्र कुनै समस्या थिएन। सानो तथा सुखी परिवार थियो हाम्रो। आयस्रोत राम्रो थियो, झैझगडा थिएन। दुई छोरा एक छोरी रहरका सन्तान देखिन्थे। तिनीहरूले पनि भनेजस्तै शिक्षा आर्जन गर्दै थिए। माइत आएका बेला सासू पनि भेट्न आउँथिन् र जहिले पनि उनले आफ्नो छोराको ख्याल गर्नू भन्थिन्। तर आमा-छोरा राम्ररी बोलचाल गरेको भने कहिल्यै देखिनँ। उनी भन्थिन् - ''बुहारी ! तिमीले मेरो छोराको जीवन सफल पारिदियौ। यो घरलाई मन्दिर बनायौ तिमीले। गाउँभरि तिम्रो प्रशंसा सुन्छु काँक्राका चिराजस्ता छोराछोरी पायौ। तिनीहरू ज्ञानी र विद्वान् भए।''
कहिल्यै माया नगरिएको र सदा घृणा गरिएको लोग्नेको लास लडेको छ आँगनमा। सानो छोरो, छोरी र आफन्तहरू रुवाबासी गरिरहेका छन्। गाउँभरिका सबै भेला भएर उसको गुणको चर्चा गरिरहेका छन्। गाउँभरिकै सबैभन्दा भलाद्मी, ज्ञानी सहयोगीका रूपमा उसको स्मरण गरिँदै छ। मेरा वरिपरि बसेका महिलाहरू मलाई सम्झाइरहेका छन् - ''छोराछोरीको अनुहार हेर्नू, तिनीहरूको छाता हुनू अब। मर्नु बाँच्नु प्रकृतिको नियम हो- जसले पनि एकपल्ट मर्नैपर्छ।''
एकाएक आँखाबाट बरर आँसु झरे। घ्याप्प घोप्टो परेछु उसको छातीमा। कसैले उठाएनन् हात समातेर। फेरि हेरेँ त्यो शान्त अनुहार। भित्र कतैबाट हुकजस्तै पलाएर आयो- ''अब त कहिले पो भेट हुन्छ र यस मान्छेसँग।''
उत्क्रिस्ठ कथा ! स्थापित
अतिथि — Sun, 07/06/2008 - 17:23
अतिथि — Fri, 11/19/2010 - 16:27
sir malai hajurko partek katha le nikai chun6an......yasari nai agadi badhdai janu..